चिया बनाउने सही तरिका के हो ? कसरी पिउने ? « Pen Nepal
चिया बनाउने सही तरिका के हो ? कसरी पिउने ?
Published On : 22 August, 2020 8:15 am By : पेननेपाल
काठमाडौं । धेरैको घरमा एकै तरिकाले चिया बनाइन्छ । पानी, दुध, चीनी, चियापत्ती हालेर उमालिन्छ । केही मसला हाल्नुछ भने उम्लिएको केही समयपछि हालिन्छ र एकछिन पुनः उमालिन्छ । तर यो विधीलाई गलत मानिन्छ । त्यसो भए चिया बनाउने सही तरिका के हो । दिनमा कति कप चिया पिउने वा खाली पेटमा चिया पिउनु हुन्छ, हुँदैन भन्नेबारे यहाँ जानकारी दिइएको छ ।
एउटा भाँडोमा पानी लिनुहोस् । त्यसलाई उमाल्नुहोस् । पानीलाई आधा मिनेटभन्दा बढी नउमाल्नुहोस् । त्यसपछि एउटा सुख्खा भाँडामा चियापत्ती हाल्नुहोस् र त्यसमाथि तातो पानी खन्याउनुहोस् । ५–६ मिनेटका लागि भाँडो छोप्नुहोस् । त्यसपछि एउटा कपमा छानेर हाल्नुहोस् । अब स्वाद अनुसार दुध र चीनी हाल्नुहोस् । एक कप चिया बनाउनका लागि आधा चम्चा चियापत्ती ठिक्क हुन्छ । चियापत्ती, दुध र चीनीलाई सँगै हालेर उमाल्नु चिया बनाउने सही तरिका होइन । यसो गर्दा चियाको सबै फाइदा नष्ट हुन्छ । यसरी चिया बनाउँदा चीया वा कफी स्ट्रङ्ग हुन्छ र यो थप कडा हुन्छ । त्यसकारण यस्तो चिया पिउनुको कुनै फाइदा छैन ।
महिलाको मुखबाट निकालियो ४ फिटको सर्प
एजेन्सी । रुसको डेगेस्टनमा एक महिलाको मुखबाट डाक्टरहरूले ४ फिटको सर्प निकालेका छन् । ती
चिडियाखानामा बाँदरसंगै एक अश्वेत बालक राखेकामा १०० वर्षपछि माफी मागियो
एजेन्सी । ओटो बेङ्घालाई कङ्गोबाट सन् १९०४ मा नियन्त्रणमा लिइयो र प्रदर्शनीमा राख्न अमेरिका लगियो।
महिलाले साडीमा स्टन्ट गरेको, यो भिडियो हेरेर चकित नहुने को होला ?
एजेन्सी । जसले महिला साडी लगाएर स्टन्ट गर्न सक्दैनन् भन्ने ठान्छ, यो भिडियोले त्यस्तालाई नाजवाफ
यो मास्क लगाएपछि, जतिनै रिस उठे पनि तपाईलाई हास्न वाध्य पार्छ !
एजेन्सी । कोरोनाले मानिसको जीवन शैलीमा परिवर्तन गरिदिएको छ । अब मोवाइलजस्तै मास्क जरुरी वस्तुमा